Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fiarovana ny mponina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fiarovana ny mponina
Malalaka ny sehatra ho an’ny fanambarana samihafa amelabelarana ny fikasana sy tetika ho fampandrosoana ny firenena. Manaitaitra sy mampanofinofy avokoa izay fikasana rehetra atolotr’ireo mpilatsaka hofidiana amin’
ity fifidianana Filohan’ny Repoblika ity. Ny tena mahaliana ny mpifidy dia ny fisongadinan’ny anjara hiantefa any amin’ny vahoaka ao anatin’ireo sori-pampandrosona ireo, na ny anjarany eo amin’ny ezaka na ny anjarany raha toa mamokatra tokoa ilay tetika. Raha toa tsy mazava izany, atao inona moa izay fampandrosoana raha hitohy hatrany ny fangirifiriana mikiky ny besinimaro ? Fahafinaretana inona moa no hositrahana na mamirapiratra tahaka ny inona aza ny manodidina, izay voatokana hivalamparan’ny olom-bitsy, kanefa ny valalabemandry dia voagejan’ny fahantrana ao anaty haizina ?
Tsy ny lanitra tsy takatra no takian’ny vahoaka, fa ny rariny fotsiny. Malaza ho manan-karena i Madagasikara, fa laza tsy ahitan’ny maro maminy, toy ny vilian-tsahona ka tsy hita hihinanana. Ny fahantrana no tsy rariny. Na tsy maintsy atao laharam-pahamehana aza ny ezaka handresena ny fahantrana, lavitra ny làlana ahatongavana any amin’io tanjona io.
Tsy ny fahalaviran’ny làlana sy ny fampideraderana tetika fampandrosona no ampy ahafahana hiraviravy tanàna. Eo ny setrasetran’ny fiainana mianjady amin’ny mponina, izay mitaky asa sy ezaka anio dia anio, tsy maintsy hisikinana ho fiarovana ny vahoaka. Fampahatsiahivana fotsiny angamba ny fiarovana ny olona sy ny fananany manoloana ny tsy fisin’ny fandriampahalemana, toy izany koa ny fiarovana ny maro hahafahany hiatrika ireo fahasahiranana, izay tsy hain’ny mpitondra ny hifehy izany tsy hihoatra ny fetra zakan’ny olona. Resaka efa miverimberina ireo. Izay miteny moa dia manambara fitserana sy firaisan-kina, kanefa na inona na inona filazany ny fahavonony hisoroka izany dia tsy nahitana fiovana hatrany ny vokatra azo.
Mandrakariva dia hadino ny filazana ny anton’ny fanjakan’ny tsy rariny toy izany. Ny rariny moa dia tsy vitan’ny fanambarana azy fotsiny. Ny rariny dia miankina amin’ny fitovian-jo ahafahan’ny olona tsirairay avy misitraka ny anjarany. Ny fampiharana lalàna ihany anefa no antoka voalohany ahafahana miaro sy mampitovy ny zo ny olon-drehetra. Inona ny antoka ahafahan’ny vahoaka mamerina toky amin’ny fampiharana ny lalàna ? Valin’izay fanontaniana izay no hahafahana mitaratra ny mampety na tsy mampety ny fanankinana fanantenana amin’ny fisehon’ny fiovana izay atao ho fahagagana.